उन्यू अनुसन्धानमा नेपाली
भारतबाट हालै पुस्तक ‘एन एन्नोटेटेड चेकलिष्ट अफ इन्डियन टेरिडोफाइट्स’ छापिएपछि नेपाली वनस्पतिविदद्वय धनराज कँडेल र नवल श्रेष्ठलाई बधाईको ओइरो लाग्यो । बधाई पाउनुको कारण थियो, उन्यूका दुई प्रजातिको नामकरण उनीहरूको नामबाट गरिएको विवरण पुस्तकमा उल्लेख हुनु ।
भदौ १ गतेबाट एकैपटक चारवटा संहिता लागू भएका छन् । यो नेपालको कानुन र न्याय प्रणालीका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो । पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ ल्याइएका हुन् ।
केही साताअघि राजधानीको एक निजी विद्यालयमा कक्षा ४ की छात्रा शौचालयको धारामा ठोक्किएर घाइते भइन् । उनलाई १५ दिन अस्पताल राखेर उपचार गराउनुपर्‍यो । पूर्वाधार निर्माणमा विद्यालयले गर्ने हेलचेक्र्याइँका कारण हुने यस्ता घटना बेला–बेला सार्वजनिक भइरहेकै हुन्छन् ।
नेपाली आप्रवासी कामदार र कैद हस्तान्तरण
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरुको कमाईले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झण्डै ३० प्रतिशत हारहारीमा योगदान पुऱ्याएको छ ।
कसरी हुर्किएली मेरी छोरी ?
मेरी छोरी जन्मिँदा म दुईपटक रोएँ । सुरुमा खुसीले– २७ घन्टाको पीडादायी व्यथापछि हामीले बनाएको सानो प्रकृतिको पहिलो रुवाइ सुनेर मेरा आँखा रसाए । पछि दु:खले– यस पृथ्वीको नयाँ प्राणीलाई च्यापेर अस्पतालको झ्याल बाहिर हेर्दा पार्किङ लटमा राखिएका कारहरू, सडक पारिको मल, अल्कत्रे सडक, ढल र नाली, फोहोर फाल्ने ठाउँ जहाँ कुनै बेला कटुसको घारी हुन्थ्यो, त्यो देखेर दोस्रोपटक रोएँ ।
दलालको दलदलमा महिला
गीता शर्मा (ढुंगाना)
भारतीय सहरबाट नेपाली महिलाको उद्धार गरिएका खबर आइरहेका हुन्छन् । भारतीय महिला आयोगले दिल्लीबाट १६ नेपाली महिलाको उद्घार गर्‍यो । त्यसको एक सातामै बनारसबाट १६ महिलाको उद्घार गरियो । फेरि दिल्ली र बनारसमा छापा मारेर थप नेपाली महिलालाई घर फर्काइयो ।
सामान्यत: सर्प र नागलाई एउटै प्रजातिको भनिन्छ । शास्त्र अनुसार भने सर्प पृथ्वीवासी हो भने नागचाहिंँ पाताल निवासी । त्यसैले यी दुई आकार, स्वभाव, गुण आदि सबै दृष्टिले फरक–फरक हुन् । सर्पलाई लम्बाकार सरीसृप तथा नागलाई चाहिँं अर्धसरीसृप र अर्धदेवाकृति भएको नृसिंहजस्तै विलक्षण मानिएको छ ।
माल्दिभ्सको शल्यक्रियामा नेपाली डाक्टर : प्रतिभा पलायनमा कस्को चासो
डा. टीकाराम भण्डारी
हप्ताभर छापामा धेरै मन छुने समाचारहरु आए, हत्या, बलत्कार, सडक दुर्घटना र अन्य धेरै दु:खद खबरहरु । नकरात्मक सोच, नकारात्मक समाचार सुन्न बानी परेका हाम्रा कानलाई सकरात्मक खबरमा पनि कुनै गढबढी देखिदो रहेछ । यस्तै भयो । समाचार थियो, मालदिभ्समा पहिलो सिएबिजी (मुटुको नशाको शल्यक्रिया) ।
सिंहदरबारमा सीमित रहेका अधिकार स्थानीय तहमा संवैधानिक रूपमै हस्तान्तरण भएका छन् । तर स्थानीय सरकारहरूले एक वर्ष बित्दा पनि जनआकांक्षा अनुरूप काम गर्नसकेको देखिँदैन । उल्टै अनेकथरी करको भार थोपरेकामा नागरिकको गुनासो छ ।
नयाँ गाउँ–सहरमा ढल
सफा खोलानालाले जलचरहरूको गतिविधि बढाउँछन् । मनोरञ्जन दिन्छन् । वरिपरिका स्थान पनि आकर्षक बनाउँछन् । स्वच्छ वातावरण हामी सबैको स्वास्थ्य प्रबद्र्धन गर्ने र समृद्धि बढाउने आधार हो ।
के सिक्छन् नानीहरू ?
दस वर्षअघि राजधानीको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा पढाउन जाँदा मलाई साना नानीहरूसित कस्तो व्यवहार गर्ने थाहै थिएन । बालबालिकाका आनीबानी र सिकाइ पनि म बुझ्दैनथेँ । शिक्षक हुनुलाई एउटा सामान्य जागिरका रूपमा मात्र लिएको थिएँ । पूर्वतयारी विना पढाउन थालेँ ।